थाहा छ ? दन्त मन्जनले दाँत मात्र होइन् अनुहार पनि चम्काउँछ – NepalajaMedia
थाहा छ ? दन्त मन्जनले दाँत मात्र होइन् अनुहार पनि चम्काउँछ
January 10, 2021 54
दन्त मन्जनले अनुहारको दाग हटाउछ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । दन्त मन्जनले त दाँत पो सफा गर्छ भन्ने सोचिरहनु भएको होला? तर यो अनुहारको कालो धव्बा हटाउनको लागि धेरै उपयोगी हुन्छ।
एउटा सुख्खा सफा कचौरामा-
२ चम्चा पानी थप्नुहोस् र राम्ररी मिसाउनु होस्
अनुहारको दाग हटाउने थप तरिका
काँचो दूधमा कपास डुबाई अनुहारमा बिस्तारै दल्ने र केही समय त्यसै छोडेर सुकेपछि मनतातो पानीले धुने गर्नुपर्छ ।
अनुहारमा घ्यूकुमारी दलेर सुक्न दिई धुने गर्नुपर्छ । यसले छालालाई म्वइस्चराइज गर्न पनि मद्दत पुर्याउँछ । बदामलाई रातभरि भिजाउने र बिहान उठी यसको पेस्ट बनाई यसमा चन्दनको पाउडर मिसाएर बनाएको पेस्ट अनुहारमा दल्ने गर्नाले अनुहारका दाग बिस्तारै हराउँदै जान्छन् ।
ओखरलाई कुटेर त्यसमा दही र केही थोपा बदामको तेल हाल्नुहोस् । यसलाई अनुहारमा लगाउनुहोस् । यसले छालामा चमक ल्याउँछ । तपाईंको छाला एकदमै तैलीय छ भने अन्डा र गहुँको पिठोको प्याक लगाउनुहोस् ।
हरेक रात सुत्नुअघि अनुहारमा जैतुनको तेल लगाउनुस् । यसले छालामा जमेको कालो दाग कम गर्न पनि मद्दत पुर्याउँछ । केरा, मौसम, अन्डाको प्याकले अनुहारमा भएका दागहरू हटाउन मद्दत गर्छ ।
खैरो चिनी, कागती र नरिवलको तेल मिसाई मसाज गर्नाले सनबर्नको असर कम गर्न सकिन्छ । काँक्रोको पेस्ट, मुल्तानी माटो र रोज वाटरको प्याक बनाएर लगाउँदा अनुहारमा चमक आउँछ ।
Prevपूजा गर्न गएकी महिलाकोको बलात्कारपछि हत्या, मन्दिरका पुजारी मुख्य अभियुक्त
Nextआजको राशिफल || वि.सं. २०७७ पौष २७ गते सोमवार (जनवरी ११ तारिख)